AVI Size Reducer: Yaree AVI (Divx, Xvid) Video Size si fudud oo dhaqso
> Resource > Video > Sida loo yareeyo awoodda AVI (Divx, Xvid) Video
Dadka intooda badan doonayaa in la yareeyo tirada AVI video si ay u geliyaan online, u soo dir email, ama waxa ihin DVD disk ah. Haddii in aad ka, halkan sida si ay u qabtaan hawshan la isticmaalayo xirfad yaraynta software file ah: Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Barnaamijkan qoreysa xoog badan, ka shaqeynayaan hufan oo fudud isticmaalka. Sidaa daraadeed, yaraynta tirada aad AVI video jidka ku kaaftoomi-free ugu.
1. Ku dar ilaha AVI videos
Guji "Add Files" badhanka xitaa folder faylka in ay doortaan files AVI aad rabto in aad si loo yareeyo xajmiga. Si aad u dajiyaan files duwan ee hal mar, waxaad dooran kartaa mid ka mid file ka dibna hoos u qaban "Ctrl" marka la xulanayo in ka badan.
AVI file reducer sidoo kale waxa uu soo jiitaa feature-n-dhibic, si aad si toos ah iyaga ay kale oo jiidi karaan ay suuqa kala hoose. Ka dib markii ay ku daray dhammaan faylasha, aad ku qorshayso kartaa magaca faylka, sheeg folder wax soo saarka, ama double u riix si aad u ku eegaan.
2. Dooro "Tirada yar" si loo yareeyo xajmiga AVI
Riix image qaab dhinaca midig ee suuqa hoose in ay soo bandhigaan suuqa kala saarka. Halkan, xulo qaab AVI asalka ah, ama qaab kale oo ka mid ah doorashada sida FLV aad. Markaas riix xaq u hooseysa Dejinta button. Daaqadda muuqata, sax "Size Small" doorasho off, oo ka dhacay Ok inuu ku soo laabto uu furmo suuqa ugu weyn.
Hadda waxaad arki kartaa qiyaasay size file ah file wax soo saarka iyo is-barbar mid ka mid ah asalka. Sidoo kale, waxaad riixi kartaa icon Play in ay ku eegaan saamaynta saarka video ah.
Talo: Waxaad sidoo kale hoos u dhigi karaa tirada file AVI by qabsado-beegyada uu u gacanta. Si tan loo sameeyo, kaliya ka qaadan xal aad u jeclaystay, heerka yara, heerka jir, encoder, iwm furmo Settings. Si kastaba ha ahaatee, dejinta koobin hoose ayaa sidoo kale soo saari doonaan hoose video oo tayo leh, sidaa darteed waa in aad loo gaaro isku-dheelli oo aan laga badinin tayo aad u badan.
3. Dhoofinta ah AVI video cusub
Marka aad ku qanacsan size file iyo tayada video, si fudud ku dhuftay Beddelaan badhanka si ay u bilaabaan yareeyo xajmiga AVI. Barnaamijkan waxaa si heer sare ka farxiyay la keentay Wondershare technology APEXTRANS ™, si aad u heli doonaan sida ugu dhaqsaha badan hoos file AVI. Sidoo kale, waxaad eegi kartaa ay proress iyo waqtiga soo hadhay ay ku haboon ka bar horumarka.
Marka uu dhamaado, guji "Open Folder" si aad u hesho faylka AVI dhimay. Hadda waxaa laga yaabaa in aad u geliyaan in aad website ama ka mid ahaa in email saaxiibada la wadaaga. Haddii aad qorsheyneysid inaad gubi faylka hoos AVI in disk DVD sida D5 ama D9 ah, oo kaliya ay tagaan suuqa kala DVD hoose oo way gubi doonaan inay DVD la arrimo xor ah oo fiican in daqiiqo.
Video Tutorial: Sida loo yareeyo awoodda AVI
Sida loo Split AVI Videos